Muqdisho Archives - BaravaNewsBaravaNews
You are here: Home / Tag Archives: Muqdisho
Tag Archives: Muqdisho
Xaalada magaalada Muqdisho ayaa caaw ah mid kacsan kaddib qaraxyo is xig xigay oo ka dhacay wadadda Maka Al-Mukaama oo lagu arko ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka.
Marka laga soo tago weerarka Ismiidaamin ah oo lagu qaaday hotelka Maka- Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale qarax labaad laga maqlay meel aan ka fogeyn hotelka Naasa-Hablood ee KM4, inkastoo qaraxan danbe uusan wax saameyn ah yeelan.
Rasaas goos goos ah ayaa wali lagama maqlayaa agagaarka hotelka Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho, waxaana soo baxaya shaki ay ciidamadu ka qabaan in ay jiraan maleeshiyaad ku dhuumaaleysanaya dhimayaasha ka agdhaw goobta uu qaraxu ka dhacay.
Waxaa dumay uu bur buray dhismayaal ku yaala hareeraha waddada Laamiga ah, gaar ahaan agagaarka hotelka Maka Al-Mukarama oo loo maleynayo in ay ku hoos jiraan dad meyd ah, madaama waqtiga uu qaraxu dhacay goobtu aheyd mid aad u mashquul badan.
Waxaa goobta yaala oo burburay gaadiid faro badan oo marka uu qaraxu dhacayay halkaa u taagnaa baaritaanno ay wadeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya wali kama aysan hadal qaraxyada caawa ka dhacay magaalada Muqdisho iyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay.
Qaraxyada caawa ayaa imanaya xili maanta ra’iisal wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guulleed Khadar uu sheegay in la wiiqay awoodii ururka Al-shabaab.
Jan 7, 2019 Comments Off on Ciidamada Amaanka oo joojiyay siminaar Xisbiga Wadajir uga socday hotelka Maka Al-Mukarama
Ciidamada Booliiska dowladda Soomaaliya ayaa joojiyay siminaar hotelka Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho uga socday Xisbiga Wadajir oo ka mid ah Asxaabta siyaasada dalka.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo goor dhaw bartiisa Facebook uga hadlay dhacdadan ayaa ku eedeeyay xafiiska madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu ka soo baxay sida uu hadalka u dhigay amarka lagu joojiyay siminaarka.
‘’Waxaa amar ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda Soomaaliya lagu xiray hotelka Maka Al-Mukarama oo maalmihii ugu danbeeyayba uu ka socda siminaar sare loogu qaadayay Aqoonta iyo Wacyiga siyaasadeed ee Kaadiriinta Xisbiga Wadajir ‘’ ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Wuxuu sheegay in wax laga xumaato tahay in ciidamada Booliiska oo loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan nabad-galyada loo adeegsado sida uu hadalka u dhigay caburin iyo caga-jugleyn.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca Laamaha Amniga dowladda Soomaaliya oo la xiriira warka ku saabsan is hortaaga siminaarka hotelka Maka Al-Mukarama Xisbiga Wadajir.
Dowladda Soomaaliya oo u muuqata in ay deg deg uga jawaabeyso qoraal ka soo baxay wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in Ncholas Haysom dalka looga baahneyn
Qoraalka oo ka soo baxay Wasaarradda arrimaha Dibedda Soomaaliya ayaa lagu yiri in dowladda Soomaaliya ku wargalineyso xoghayaha guud ee QM in aan wadanka laga rabin, kana shaqeyn karin wakiilka Qaramada Nicholas Haysom.
Qoraalka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa daba joogay warqad wakiilka xoghayaha guud ee QM uu uga codsaday dowladda in ay jawaab deg deg ah ka bixiso wixii ka dhacay magaalada Baydhabo gaar ahaan xarriggii Wadaadka Mukhtaar Rooboow Cali Abuu Mansuur.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Oo Daah-furay Qorshaha Horumarinta Qaranka ee 2020-2024
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya , Xasan Cali Khayre ayaa maanta guddoomiyay shir lagu daah furayay qorshaha horumarinta qaranka ee 2020-2024 kaas oo gundhig u noqonaya horumarka la doonayo in dalku gaaro muddda shan sano gudahood ah.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xassan Cumar oo war-fidiyeenka kula hadlay goobta uu Qaraxa ka dhacay caawa oo lagu magacaabo Baar Somalia ayaa sheegay in ay ku dhinteen Afar ruux oo mid ka mid ah uu yahay carruur, halka tiro ka badan 7 ruux ay ku dhaawacmeen.
Baarkan oo dhawaan la furay ayaa dhabarka danbe dhinaca laamiga ka xiga Shaleemo Soomaaliya, wuxuu-n ahaa Baar habeenkii dadku kulmaan oo siweyn loo camiro islamarkaana dhawaan la furay.
Gaariga ayaa la sheegay marka uu qarxayay in uu ku sii socday dhinaca waddada aada Dabka, hasse ahaatee markii uu marayay afafka hore ee baarka uu mar kaliya Qarxay.
Goobta waxaa gaaray saraakiisha ciidamada Booliiska oo wada baaritaanno la xiriira Qaraxa iyo halka uu ka yimid madaama xiliyada habeenkii gadiidka isticmaala waddada Maka Al-mukarama siweyn loo baaro.
Total Visit : 40408
Total Hits : 98552